Ethiopia oo soo Fara Gelisay Khilaafkii Ahlu-Suna Ka Dhex Jiray (Faahfaahinta Shir ka Dhacay Addis Ababa) | raascasayrmedia.com
← Diyaarado joog hoose ku duulaya oo saakay lagu arkay Muqdisho iyo
Somaliya oo lagu tilmaamay dalka Adduunka ugu badan ee ay ku nool yihiin dadka madaxa looga jiro. →
Ethiopia oo soo Fara Gelisay Khilaafkii Ahlu-Suna Ka Dhex Jiray (Faahfaahinta Shir ka Dhacay Addis Ababa)
Qaar ka mid ah xubnaha ururka Alu-Suna oo khilaafaad xoogan u dhexeeyey ayaa markii ugu horeysay toddobaadkan looga yeeray magaalada Addis ababa ee wadanka Ethiopia si halkaasi dhexdhexaadin ay ugu sameeyaan saraakiil ka tirsan dawlada Ethiopia.
Wafdigaasi ka socda Ahlu-Suna ee tegey Addis Ababa waxay shaley [Jimce ahayd] dib ugu soo laabteen gudaha wadanka, waxayna isugu jireen Ahlu Suna qeybta Gobolada dhexe iyo Caabuudwaaq, gaar ahaan xubna sare ee maamulka Ahlu Suna oo waayadan dambe khilaaf xoogan uu ka dhex jirey isla markaana sababay in dagaaladii ay kula jireen Xarakada Al-Shabaab ay ku laciifeen.
Masuuliyiinta Ahlu Suna ee tegey Addis ababa ayaa waxaa ka mid ahaa gudoomiye ku xigeenka Guriceel Cismaan Nuur Taardhuleed oo markii uu shalay yimid Guriceel isaga iyo xubno kale ay sheegeen in khilaafkoodii la soo afjaray oo Ethiopia ay soo heshiisiisay.
“Wixii hadda ka dambeeya waxaan diyaar u nahay in si wadajir ah u dagaal galno waana la arki doonaa. Ahlu suna hadda waa mid”, ayuu yiri Cismaan Nuur Taardhuleed oo sidoo kale wax aad u yar ku tilmaamay farqigii u dhexeeyey dhinacyada Ahlu-Suna.
Inkastoo uusan sheegin gudoomiye ku xigeenka qodobada la isku hayey iyo waxa lagu heshiiyey, haddana RBC Radio ayaa ogaatay in Ahlu Suna loogu baaqay in ay khilaafkeeda dhameyso maadaama hadda xaalad dagaal lagu jiro.
Khilaafka Ahlu Suna
Sida xogta ay nagu soo gaareyso khilaafka ka dhextaagnaa Ahlu-Suna ayaa intiisa badan salka ku hayey xagga maamulk, Waxaana masuuliyiin magacooda diiday ay u xaqiijiyeen RBC Radio in arimaha la isku diiday ay ka mid ahayd jagooyinka gudoomiyaha iyo ku xigeenka Ahlu Suna oo labaduba beesha Guriceel isku darsatay halka Ahlu Suna Caabudwaaq oo heysata ciidanka ugu fara badan ay diidaneyd qaabka maamulkaasi.
Sidoo kale qeybta Ahlu Suna ee Muqdisho oo uu hogaaminayey afhayeenkii ururka Sheekh C/qaadir Soomow ayaa horey ugu gacan seyrey maamulka dhexe. Waxayna arintaasi sii kala fogeysay wada shaqeyntii ururka ka dhex jirtay.
Khilaafaadka ka dhex taagan Ahlu Suna waxaa sidoo kale saameyn ku lahaa heshiiskii ururku la galay DKMG bishii March 2010 ee ka dhacay Ethiopia kaasoo xuno fara badan oo ka tirsan Ahlu Suna ay sheegeen inaan la fulin ballamihii lagu soo galay, hase yeeshee ay dhacday in xubno gaar ah oo ka tirsan ururka uuna hogaaminayey gudoomiye ku xiigeenka Ahlu Suna Sheekh Maxamud Yuusuf Xeefow ay DKMG martiqaad ugu sameysay Muqdisho iyadoo dhaqaalana gacanta u galisay.
Dhamaan arimahan ayaa sababay in hogaankii ururka Ahlu Suna uu u kala jabo qaab qabiil, waxayna koox kasta yeelatay maamul u gaar ah iyadoo ku hadlay magaca Ahlu Suna illaa laga soo gaarey shirkii UN-Ka ku qabtay magaalada Nairobi ee dhacay 12-13-kii April oo ururka Ahlu Suna labo garab uga qeybgaleen.
Sida muuqata shirkan shalay lagu soo gabagabeeyey Addis ababa waxaa lug weyn ku lahaa dawlada Ethiopia oo dad badani sheegaan inay dhaqaale iyo hub ku taageerto Ahlu Suna, Mana cadda in khilaafkii Ahlu Suna uu halkaasi ku dhamaaday hadda maadaama xubnihii iskhilaafsanaa aysan ka hadlin shirkan Ethiopia ugu qabatay Addis ababa.
Waxaana shirkan uu ku soo beegmay xilli dad badan ay hadalhayeen farqiga weynaday ee ka dhexeeya hogaanka Ahlu Suna oo iyaguna la mid noqday sida siyaasiyiinta oo marka khilaafaad dhexmaraan ay adkaato in ay iyaga iskood u heshiyaan.
Si kastaba ha ahaatee waxaa la arki doonaa waxa heshiiskan uu ka bedelo dhaqdhaqaaqii Ahlu Suna guud ahaan iyo waxa ay dhinacyada iskhilaafsanaa ka yiraahdaan.